तीजकाे मुखैमा साेच्नै नसक्ने गरि सुनको मूल्य…. हेर्नुहोस् कतिमा भइरहेकाे छ काराेबार ? – Jagaran Nepal
तीजकाे मुखैमा साेच्नै नसक्ने गरि सुनको मूल्य…. हेर्नुहोस् कतिमा भइरहेकाे छ काराेबार ?
काठमाडौं । काठमाडौं । आज (मंगलबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा २२ सय रुपैयाँले बढेको छ । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य ९९ हजार ९ सय रूपैयाँ रहेकाे छ । चाँदीको मूल्य तोलामा तोलाकाे १३ सय ८० रूपैयाँ रहेकाे छ ।
अघिल्लो हप्ताको अन्तिम दिन (शुक्रबार) प्रतितोला ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ छापावाल सुन प्रतितोलाको मूल्य आइतबार ९८ हजार ४ सय रुपैयाँ मूल्य कायम भएको थियाे भने । साेमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेर ९८ हजार२ सय रूपैयाँमा काराेबार भएकाे थियाे ।
यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य आइतबार ९७ हजार ७ सय रुपैयाँ छ । हिंजाे तेजाबी सुनको मूल्य शुक्रबार ९७ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेकाे थियाे । अघिल्लो हप्ताको बुधबार तोलामा ६ हजार २ सय रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य बिहीबार भने तोलामा २ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको थियो ।
आइतबार चाँदीको मूल्य तोलामा तोलामा अस्ती ३० रुपैयाँले घटे १ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ रहेकाेमा हिंजाे पनि घटेर १ हजार ३ सय १५ रुपैयाँका काराेबार भएकाे थियाे ।